नहरमा पानी घटेपछि सुक्खा खेतमै रोपाइँ - Jhilko
भरतपुर महानगरपालिका–२१ स्थित मञ्जु सिंखडाले सुख्खा खेतमै रोपाइँ गरेका छन् । नहरबाट पर्याप्त मात्रामा पानी नआएपछि सुक्खा खेतमै रोपाइँ गर्न बाध्य भएको सिंखडाले बताए । उनले भने, “नहरमा पानी छैन, आकाशको पानीको भर पर्नुपरेको छ ।”
नारायणी लिफ्ट सिँचाइअन्तर्गतको खगेरी नहरको पानीले रोपाइँ गर्दै आएका यहाँका किसान नहरले पर्याप्त मात्रामा पानी नपठाउँदा यही सुक्खा खेतमा धान रोप्न बाध्य भएका छन् । नहरमा पानीको मात्रा घट्दै गएकाले अहिले पश्चिम चितवनका अधिकांश खेतमा पानीको अभाव हुँदाहुँदै रोपाइँ चलिरहेको छ । धेरैजसो सुक्खा खेतमै रोपाइँ गरेर किसान आकाशे पानीको भरमा छन् । स्थानीय किसान नन्दलाल ढकालले भन्नुभयो, “सिमसिमे पानी नपर्दा बीउ मर्ने सम्भावना छ, बीउ म¥यो भने खेत बाँझै हुन्छ कि भन्ने डर भो ।” उनले पनि केही दिनअघि सुक्खा खेतमै रोपाइँ गरे । केही मात्रामा आकाशबाट पानी पर्दा ढकाललाई राहतको महसुस भयो । तर बर्खाको पानीको मात्रै भर पर्नु परे रोपेको धान जोगाउनै मुस्किल पर्ने उनले बताए ।
गेट अपरेटर गुरुङले भने, “पहिला–पहिला हिउँदमै १५० सेन्टिमिटर पानी हुने नहर हो यो । साउन लागेपछि २०० सेन्टिमिटर पुग्थ्यो । अनि रोपाइँ मज्जाले चालू हुन्थ्यो ।” विगतमा नहरमा भदौको तेस्रो सातासम्म दुई मिटरभन्दा कम पानी नहुने उनले बताए। यस्तै अवस्था रहे आउँदो वर्ष नहर नै सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई छ ।
“घोलहरूमा कहीँकतै यसरी खेत रोपियो होला नभए नहरमा पानी नहुँदा छ हजार बिघामा यो पटक रोपाइँ नै शुरु हुनसकेको छैन । खेतमा पानी पु¥याउनै सकिँदैन”, खगेरी सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर गुरुङले भने । पूर्वी चितवनको खगेरी खोलालाई रत्ननगर– ९ टिकौली कपरखोरी नजिक बाँध बाँधेर नहर लगिएको छ । समितिका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार नहर विसं २०२४ देखि सञ्चालनमा छ ।
खेलकुदमा काम पनि गर्ने कि खादा मात्र लगाइरहने सिलवालज्यू ?
‘चुनाव पनि नजित्नु, आलोचना गर्न नपाउनु पनि हुन्छ ? हुँदैन...
प्रतिपक्षीहरुलाई आलोचना गर्न छुट भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने ‘चुनाव पनि नजित्नु,...
इरानमा एकै दिन कोरोनाको सङ्क्रमणबाट यतिठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको पहिलो घटना...